Karoona Fayrus (Coronvirus) oo Meel Xun La Maraya Iran iyo Ilhan Omar oo dalbatay in Cunaqabataynta laga qaado. | Dhexnimo Media
Home Wararka Karoona Fayrus (Coronvirus) oo Meel Xun La Maraya Iran iyo Ilhan Omar...
Karoona Fayrus (Coronvirus) oo Meel Xun La Maraya Iran iyo Ilhan Omar oo dalbatay in Cunaqabataynta laga qaado.
IRAN (Dhexnimo Media )Xubin ka tirsan gollaha khubarada Iiraan ayaa u dhintaymaanta iyadoo wadanka laga soo sheegaayo 1,053 kiis oo cusub iyo 129 dhimasho ah oo cusub oo u dhintay coronavirus, oo sidoo kale loo yaqaan COVID-19, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA.
Waxaa la dhigay isbitaal ilaa Sabtidii wuxuuna ku dhintay subaxnimadii Isniinta maant magaalada barakaysan ee Qom, sida ay qortay IRNA.
Dhanka kale wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in tirada dhimashada dadka Iran ay gaadhay 853, iyadoo guud ahaan ay marayso tiradu 14,991 kiis. Waxaa kale oo ay sheegtay in 4,996 bukaan ay ka bogsadeen.
Iiraan waa dalka ugu cudurka xoog ugu faafay guud ahaan bariga Dhexe sida oo kalana waa dalka saddexaad ee uu xoog ugu faafay adduunka marka laga yimaado Shiinaha iyo Talyaaniga.
Cudurkan galaaftay hoggaanka dhawr siyaasiyiin Iiraaniyiin ah iyo mas’uuliyiin, xukuumada ku jiraba waa la qaadsiiyay sida laga soo xigtay ilo ka ag dhaw masuuliyiinta iyada oo qaarna ay u dhinteen cudurka.
Ali Akbar Velayati, oo ah qofka ugu sareeya ee looga shakisan yahay cudurka ayaa ah lataliyihii Hogaanka Sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei siyaasada arrimaha dibedda.
Previous articleSacuudi Carabiya oo dhammaan shaqada ka joojisay howlihii dowliga ahaa cabsida Coronavirus awgii
Next articleIRAN oo uu meel xun la maraayo karoona fayrus (Coronavirus) iyo sucuudiga oo Joojiyey Shaqooyinkii Dawlada Cabsi Awgeed. W/Q: Cabdiraxmaan Rashiid (Dalmar)